Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Maxkamadda Oslo oo xubno Asmara ka tirsan xukun ku ridday
Maxkamadda Oslo oo xubno Asmara ka tirsan xukun ku ridday
November 11, 2012 - Written by xaajo - Edited byxaajo
Wararka boga Xaajo kasoo gaaraya caasimada boqortooyada Norway ee Oslo ayaa sheegaya in 5tii bisahan Nevember maxkamad lasoo taagay afar eedaysane oo ka tirsan kooxda Asmara een wali nabada qaadan oo iyagu sanadkii inaga tagay weerar dhaawac culus keenay u gaystay muwaadin kasoo jeeda Deegaanka Soomaalida Itoobiya oo lagu macaabo DR Yusuf Adan.
Maxkamada ayaa eedaysanaha nabarka u culus lahaa oo lagu magacaabo Axmed Afjar ku xukuntay 7 bilood oo xarig ah iyo inuu bixiyo aduun gaaraya NOK 130 000 oo u dhiganta USD 22 000 oo xaq ah. Sadexda danbiile ee kale oo magacyadooda naloogu sheegay Cabdishakuur Gacma-Dheere, Axmed Haadi iyo Cabdiqaadir Iltol ayaa maxkamadu xukunkooda dib u dhigtay, kadib markii xaakimku sheegay in baadhitaan dheeraad ah loo baahan yahay, waxaana inay weerarka qayb ka ahaayeen kasakoow lagu eedeeyay inay been ka sheegeen maxkamada horteeda.
Afarta eedaysane ayaa weerar aan sababtiisa la garanayn u gaystay Dr Yusuf oo xiligaa qof saaxiib ah geeyay munaasabad Soomaalida Oslo qabsatay, iyagoo dhaawac culus kasoo gaarsiiya mid ah labada indhood. Maxkamada ayaa ninka xukunku ku dhacay u sheegtay inuu racfaan ka qaadan karo, iyadoo sadexda eedaysane ee kalana loo sheegay in si dhaqso ah maxkamad loogu soo tuuri karo, isla makaana ayana wadanka ka bixi karin inta kiiskani socdo.
Dhibanaha dhaawaca loo gaystay ayaa ka mid ah aqoonyahanada kasoo jeeda Deegaanka ee aaminsan inaan qadiyada gobalka dagaal lagu xalin karin, waxaana la aaminsanyahay inuu eersaday fikirkiisa khaaska ah ee uu ka qabo dhulkuu u dhashay.